Arag hotelka ay ijaaratey kooxda Real Madrid + Sawirro – Gool FM
Arag hotelka ay ijaaratey kooxda Real Madrid + Sawirro
Raage May 30, 2017
(Cardiff) 30 Maajo 2017 – Xarunta kooxda Cadcadka ee Blancos ee Cardiff ayaa noqonaysa Mercure Holland hotel, kaasoo ku yaalla bartamaha magaalada isagoo 2 KM uun u jira garoonka lagu ciyaarayo ee Millennium Stadium.
Hoteelkan oo ah nooca loo yaqaanno 4-ta Xidigood ayaa kaalinta 12-aad uga jira 73-da hoteel ee ugu adeegga wanaagsan magaalada Cardiff, waana hoteel ay door bideen Cristiano Ronaldo iyo saaxiibadii.
Degitaanka hoteelkan ayaa kasoo horjeeda dabeecadda kooxdaLes Merengues oo badanaa raaxada hoteelka ka door bidda deggannaanta iyo adeegga ama saamaynta uu ku yeelan karo bandhiggooda iyagoo marar badan dega hoteello iska heer dhexaad ah, iyadoo uu hoteelkani ka raaxo badan yahay marka loo eego midkii ay degeen final-kii Lisbon ee 2014 iyo Milano sanadkii tegey.
Go’aanka ay markan qaateen ayaa sida la sheegay salka ku haya dhanka amaanka.
RASMI: Asmir Begovic oo isaga tagay kooxda Chelsea
“Waxaan rajeynayaa inuu Ramos 90-ka gool naga dhalin.”.